तपाईले मिठो मान्दै खाने ‘पानीपुरी’ को बारेमा यी कुरा थाहा छ ? सबैले जानी राखौं – Annapurna Daily
तपाईले मिठो मान्दै खाने ‘पानीपुरी’ को बारेमा यी कुरा थाहा छ ? सबैले जानी राखौं
On Jun 3, 2021 1,680
चिज एउटै, नाम फरक:पानी पुरी चर्चित हुँदै गएपछि विश्वभर यसलाई फरक फरक नामकरण पनि हुन पुग्यो। यसलाई कुनै ठाउँमा गोलगप्पाको नामबाट चिनिन्छ भने कहीँ ठाउँमा पानीपतासेको नामबाट । कतै पानीपुरीलाई खाली प’कौडाको नामबाट पनि चिनिन्छ भने कहीँ स्वादिष्ट चाट व्यञ्जनको नामबाट चिनिन्छ ।
पानी पुरी खाँदा मानिसको जिब्रोमा स्वादको मज्जा भरिइदिनुका साथै खाऊ खाऊ ला’ग्ने बानीको विकास समेत गरिदिन्छ ।पानीपुरलाई सही ढ’ङ्गबाट बनाएर खाएमा यसले शरीरलाई ए’सी डि’टीबाट राहत दिलाउँछ भने मु’डलाई फ्रेस बनाउँछ ।
एक अनुसन्धानले पानी पुरी पुरै क्यालोरी फुड भएको बताइएको छ । यसको एक प्लेट पानीपुरीमा चार वटा पीस हुने गरेको छ भने त्यसमा करिब १ सय क्या’लोरी हुने गर्छ । तर, मानिसहरू एकै पटक धेरै खाएर श’रीरलाई अ’स्वस्थ बनाइरहेका हुन्छन्। किनकि यो एक प्रकारको ज’ङ्क फु’ड पनि हो।